Fisorohana fanararaotam-pahefana :: Mitoetra ny fitakiana ny fitsipi-pitondran-tena amin’ny governemanta • AoRaha
Fisorohana fanararaotam-pahefana Mitoetra ny fitakiana ny fitsipi-pitondran-tena amin’ny governemanta
Tsy maintsy manara-dalàna. Nankatoavina nandritra ny Filankevitry ny governemanta, tamin’ny talata teo, ny fehezan-dalàna mamaritra an’ireo fitsipi-pitondran-tena tsy maintsy harahin’ireo mpikambana ao anatin’ny rafitra mpanatanteraka.
Nohamafisina ao amin’ireo andininy ao anatin’ity fehezan-dalàna ity ny fanomezan-danja ny fanajana ny etika sy ny fitsipika mifehy an’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta. Isan’izany, ohatra, ny fifanajana, ny firaisan-kina eo amin’ireo samy mpikambana. Eo ihany koa ny fanajana an’ireo antanantohatry ny rafi-pitantanana eo amin’ireo samy andrimpanjakana, ny fanajana tamberin’andraikitra, ny tsy fivadihana amin’ny teny nomena…
Nomarihin’ny praiminisitra, Ntsay Christian, taorian’ny fijoroan’ny governemanta amin’ny endriny vaovao koa fa: “tokony ho lohany amin’ny fanajana lalàna ary hanome ohatra tsara eo amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana ireo mpikambana ao amin’ny governemanta”.
“Efa tapitra ny fe-potoana nisian’izany olom-panjakana tsimatimanota izany. Tsy azo ekena koa ny tsy fahaiza-mitantana, ny fanaovana kolikoly na ihany koa ny fanodinkodinam-bolam-panjakana”, hoy izy.
Isan’ny toromarika nomen’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry nandritra ny Filankevitry ny minisitra niarahany tamin’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta voalohany, teny Iavoloha, io fanajana ny fitsipika mifehy ny rafitra mpanatanteraka io.
“Tsy vao amin’izao fotoana izao no nampiharana an’ireo fitsipika ireo fa efa nisy foana izany ary tokony tandrovana sy arahana mandrakariva», hoy ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina sady mpitondra tenin’ny governemanta, Rakotondrazafy Andriatongarivo Lalatiana, omaly.
Tsy niova fa vao mainka nohamafisina koa ny tsy fahazoan’ireo mpikambana ao amin’ny governematna mampiasa an’ireny jiro mirehidrehitra sy anjomara amin’ny fiara ireny. Eo ihany koa ny fanaovana hitsin-dalana. Voalaza fa azon’ny praiminisitra hatao ny manao fangataham-panazavana amin’ireo minisitra, raha toa ka misy ny fandikana an’ireo fitsipika ireo. Mety hiafara hatramin’ny fanesorana an’ireo minisitra eo amin’ny toerany mihitsy aza izany, raha koa ka hiniana hatao.
Fampiharana hotsivolana :: Sanganehana tamin’ny fanapahan- kevitry ny HCC Rakotovao Rivo
Kitra – «Orange Pro League» :: Hampitamberina ny famaranana 2019 ny Fosa Juniors sy AS Adema